Uncategorized – Jaljala Online
साप्ताहिक राशिफल : फाल्गुन ०४ गते आईतबारदेखी फाल्गुन १० गते शनिबारसम्मको
मेष (चू ,चे, चो, ला, लि, लू, ले, लो,अ) आईतबार र सोमबारको समय मध्ययम रहेकोले काम गर्ने बिभिन्न अवसर आएपनि समयको ख्याल नगर्दा अरुभन्दा पछि परिनेछ ।स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्या आउनेछ भने पुरना ऋण रोगले सताउनेछ । माया प्रेममा धोका हुने तथा घर परिवार तथा दिदिबहिनी सँग मनमुटाबको सिर्जना हुनेछ । मंगलबारबाट आफन्त तथा परिवारजनको साथ […]
Posted on February 16, 2020 Author Jaljala Online	Comment(0)
नेपाली गीत संगीतले फरक मोड लिएको छ । क्यासेट, सिडि, सि आर बिटि पि आर बिटि हुँदै अहिले डिजिटल बजार र्थात युटुबमा पुगेको सबैलाइ अबगतनै छ । आजभोलि गीत संगीतको बजार भनेको नै युटुब हो, जहाँ अपलोड गर्ने अनि भिउज जस्को बढी जान्छ उस्को गीत चलेको अर्थात हिट भएको मानिन्छ । गीतलाई बिमोचन गरि बजारमा […]
विप्लब माओबादीले आज देशका विभिन्न भागमा २५ औं जनयुद्द दिबस मनाएको छ । जनयुद्दले २५ वर्षहरु पार गरेको उपलक्ष्यमा स्वदेशमा मात्र नभएर बिदेशमा समेत दिवस मनाइएको छ । फागुन १ गते देश-विदेशमा रहेका माओबादीहरुले २५ औंँ जनयुद्ध दिवस मनाइरहेको समयमा विश्वका कयौँ युवकयुवती भने पश्चिमा संस्कृतिको भ्यालेन्टाइन डे’मा रमाइरहेका छन् । सत्ताधारी कम्युनिष्टहरु पनि भ्यालेन्टाइन […]
रेशा भट्टराई ‘मिन्स हुनु भा’ छ?’ ‘हजुर बुझिनँ।’ ‘महिनावारी के……. नछुने भएको छ कि छैन भनेको।’ दसैंको बेलामा भद्रकाली मन्दिरमा मैले फूल किन्दै गर्दा एक जना अर्को ग्राहकले फूल बेच्ने दिदिलाई सोधेको यो प्रश्न जब मेरो कानमा पर्यो मेरो कान यसरी तात्यो कि मेरो शरीरमा जिरिंग काँडा उठ्यो। म एक्कासि कराएँ। ‘जानुस्, देवीलाई सोध्नुस्।’ ‘देवी […]
ज्वाला संग्रौला सहित ३ जना बिरुद्द साइबर क्राइम मुद्दा दर्ता [भिडियो]
माघ २८, काठमान्डौ । रोजगारको शिलशिलामा जापानमा रहेकी समाजसेवी तथा सामाजिक अभियान्ता ज्वाला संग्रौला सहित तिन जना बिरुद्द साइबर क्राइम मुद्दा दर्ता भएको छ । मंगलबार दिउसो साइबर ब्युरो भोटाहिटीमा आफुलाई ज्यानमार्ने धम्कि आएको भन्दै संकर तिवारीले साइबर क्राइम मुद्दा दर्गा गराएका हुन् । उनले झापा घरभई जापानमा बस्दै आएका ज्वाला संग्रौला संगै झापा घर […]
Posted on February 11, 2020 Author Jaljala Online	Comment(0)
होसियार ! बेलायतमा पढ्न आउँदा बितरा पर्नुहोला
कमल कँडेल कुनै जमाना बेलायतमा विद्यार्थी भिसामा भित्रिनेहरुको ‘स्वर्ण युग’ थियो। एउटा यूनिभर्सिटीमा पढ्छु भनेर आउने अनि अर्को कलेजमामा भर्ना गर्न पाइने। काम जति गरे पनि हुने कसैले नसमाउने। केहि विद्यार्थीको रोजाइमा ‘चारवटा कुर्ची र दुई टेबल ‘ भएका ‘बुटिक’ कलेजहरु पर्दथे। जे भए नि इज्जत थियो विदेशी विद्यार्थीको। २००८ मा छिरेका विद्यार्थीहरुको भेलले स्वर्ण […]
बिबिसी – मध्यचीनको वुहान सहरस्थित एउटा माछा बजारबाट नयाँ कोरोनाभाइरसको स ङ्क्रमण सुरु भएको वैज्ञानिकहरूले शङ्का गरेका छन्। उक्त भाइरस झन्डै १७,००० हजार मानिसमा सरेको र त्यसका कारण ३६१ जनाको निधन भएको पुष्टि भइसकेको छ। त्यो बजारमा सर्प, दुम्सीआदि जीवलाई पिँजडामा राखेर खाना वा औ षधिको रूपमा प्रयोग गर्न बेच्ने गरिन्थ्यो। तर त्यस क्षेत्रमा पशुस्वास्थ्यको […]
Posted on February 7, 2020 February 7, 2020 Author Jaljala Online	Comment(0)